OnionShare 2 inosvika sarudzo yekutamisa uye kugamuchira mafaera zvakachengeteka | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Vagadziri veTro projekiti vakatanga iyo OnionShare 2 zvinoshandiswa, ndiwe inokutendera iwe kuendesa uye kugamuchira mafaera zvakachengeteka uye asingazivikanwe, pamwe nekuronga basa reruzhinji faira-kugovana sevhisi. Iyo kodhi yeprojekiti yakanyorwa muPython uye inoparadzirwa pasi pemarezinesi eGPLv3.
OnionShare einomhanya yewebhu server inomhanya pane yemuno system muchimiro chakavanzika Tor sevhisi uye inoita kuti iwanikwe kune vamwe vashandisi.
Kuti uwane server, kero isingatarisirwe yeiiiii inogadzirwa, iyo inoshanda senzvimbo yekupinda kuronga kugovera faira (semuenzaniso, "http: //ash4…pajf2b.onion/slug", uko slug mazwi maviri akasarudzika ekuwedzera kuchengetedzeka).
Kuti utore kana kutumira mafaera kune vamwe vashandisi, ingogovana uye vhura iyo kero muTor Browser.
Kusiyana nekutumira mafaera neemail kana kuburikidza nemasevhisi akaita seGoogle Drive, DropBox WeTransfer, OnionShare inozvimiririra, haidi kuwanikwa kune maseva ekunze, uye inokutendera iwe kuendesa iyo faira zvakananga kubva kune yako komputa isina vamiriri.
Iyo imwe faira yekugovana vatori vechikamu haidi kuisa OnionShare, yakajairwa Tor browser, uye OnionShare semuenzaniso kubva kune mumwe wevashandisi.
Chakavanzika chinotumirwa kuburikidza nekufambisa kwakachengeteka kwekeroSemuenzaniso, kushandisa iyo end2end encryption mode mune mutumwa.
Kana kuchinjisa kwapera, kero inobviswa ipapoi.e. kuendesa iyo faira kechipiri mune yakajairwa modhi hakuzoshande (inoda kushandiswa kweakasiyana maitiro eruzhinji).
Iyo graphical interface inopihwa pane server server iyo inomhanya pane iyo server's mushandisi system kudzora yakatumirwa uye inogashira mafaera, pamwe nekudzora dhata kufambisa.
1 Nezve iyo nyowani vhezheni yeOnionShare 2
2 Maitiro ekuisa OnionShare paLinux?
Nezve iyo nyowani vhezheni yeOnionShare 2
Nekuvandudzwa kweiyi nyowani vhezheni se yakawedzera kugona kwete chete kugovera mafaera ako, asi zvakare gamuchira mafaera kubva kune vamwe vashandisi. Kuti utore mafaera kubva kune vamwe vashandisi, imwe kero inogadzirwa.
Nezve izvi, yeruzhinji nzira yakaitwa, iyo inobvumidza vashandisi vazhinji kurodha pasi kana kutumira mafaera.
Nekutadza, imwe-yenguva (yakasarudzika) kero dzichiri kugadzirwa, asi dzinobviswa nekukurumidza mushure mekupedzisa kwapera
Panyaya yekuendesa faira rimwe chete, kurongedzwa kwayo mu zip faira hakuchashandiswi (iyo zip inogadzirwa chete kana akawanda mafaera kana madhairekitori akasarudzwa).
Yakazara Tor-yekufambisa meek_lite rutsigiro rwunopihwa, izvo zvinorerutsa zvakanyanya kubatana neTor mune nyika ine inorema censorship.
Kuti udzivise kuvhara, kuendesa mberi kunoshandiswa kuburikidza neMicrosoft Azure gore chikuva.
Mune ruzhinji maitiro, kero haina kuchinja, chinjana chinopera, uye kero yacho inobviswa pamaoko.
Iko kusanganiswa kwekero yekusingaperi uye nzira yekutumira inokutendera iwe kuti ugadzire akareruka akagovaniswa matura saDropBox kana kuronga kusazivikanwa kuendesa ruzivo.
Yezvimwe zvekuvandudza zvakawedzerwa tinowana zvinotevera:
Wakawedzera rutsigiro rwechitatu vhezheni yeonion-services protocol.
Kuendesa iyo yekuburitsa vhezheni ye macOS mune sandbox kusarudzika mode.
Wakawedzera kugona kusarudza interface mutauro.
Yakanyatsogadziriswazve purojekiti kodhi yepasi. Kudzora mhando yeyakagadzirwa chigadzirwa cheyuniti bvunzo.
Maitiro ekuisa OnionShare paLinux?
Vanofanira kuziva izvozvo Kune mapakeji akagadzirirwa Ubuntu, Fedora, Windows uye macOS. Saka tinogona kushandisa izvi kuisa chishandiso pane yedu Linux kugovera.
Kune avo vari vashandisi veUbuntu uye zvigadzirwa, Isu tinongofanirwa kuwedzera OnionShare PPA kune yedu system. Isu tinoita izvi nekuvhura terminal uye typing inotevera kuraira:
Yenyaya yeavo varin vashandisi veFedora uye avo vanobva mairi, kumisikidza kunoitwa nekuita unotevera kuraira:
Pakupedzisira, zvisina kufanira muArch Linux mune iyo AUR repositories pane yekushandisa package uye isu tinogona kuisa izvi pane yedu system nekuteedzera unotevera kuraira:
Kune mamwe ese ekuparadzirwa kweLinux iwe unogona kuumbiridza nekutevera mirairo mune iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » OnionShare 2 inosvika sarudzo yekutamisa uye kugamuchira mafaera zvakachengeteka